Semalt को एसईओ कार्मिक ड्यासबोर्ड र लोकप्रिय विश्लेषक उपकरण बीच के भिन्नता छ?
एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्ड, Semalt को एक विस्तृत विश्लेषण उपकरणले यसको प्रतिस्पर्धा र लागत विचार गरी सबै प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्दछ। आज हाम्रो गाईडमा, हामी तपाईंलाई अनौंठो लाभहरू साझा गर्ने योजनामा ​​छौं कि त्यस्ता उपकरणले तपाईंलाई बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बढि प्रस्ताव गर्दछ।
तसर्थ, तपाईं जो SEO विश्लेषण र अडिट सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ र जो उत्तम उपकरणहरूमा पहुँच गर्न चाहान्छन्, अब तपाईंले टाढा हेर्नु आवश्यक पर्दैन। मात्र समय लिनुहोस् यो पूर्ण गाइड पढ्नुहोस् जसले तपाईंलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ, हरेक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै; किन तपाईं Semalt एसईओ व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड आज को उपयोग गर्न छान्नु पर्छ।
यस गाईडको सामग्रीको साथ सुरू गर्न, आउनुहोस् हामी विश्लेषण र अडिटिंग उपकरणहरूको महत्त्वको बारेमा कुरा गरौं।
विश्लेषण र अडिटिंग उपकरणको महत्त्व
सहि उपकरणहरूको प्रयोग गरीएको सामग्री अडिटका विभिन्न फाइदाहरू छन्। स्पष्टसँग सुरू गरौं:
तपाइँको लेख र अन्य स्वरूपहरूको (दीर्घकालीन) प्रदर्शनको विश्लेषण द्वारा, तपाइँ तपाइँको सामग्रीको शक्ति र कमजोरीहरू बुझ्न सिक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं यो ज्ञानलाई तपाईंको भविष्यको उत्पादनमा समाहित गर्न सक्नुहुनेछ, जसले लामो अवधिमा तपाईंको सम्पूर्ण सामग्री पोर्टफोलियोको प्रासंगिकता बढाउँदछ।
स्क्यानको बखत, तपाईंले डुप्लिकेट सामग्री, तपाईंको भनाइहरूमा असंगतिहरू, वा आंशिक बेमानी सामग्री सामना गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाइँ प्राविधिक वा सामग्री (खोज इञ्जिन) अप्टिमाइजेसन मार्फत अतिरिक्त अनुकूलन सम्भावना पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ - विशेष गरी प्रयोग गरिएको कुञ्जी शव्दको बारेमा।
प्रिन्ट, सामाजिक मिडिया र व्यक्तिगत रूपमा सहित तपाईंको सबै च्यानलहरूमा तपाईंको संचारको पूर्ण क्षैतिज दृश्य; तपाइँको ब्रान्डि and र स्थिति को लागी नयाँ प्रोत्साहन दिन्छ।
तपाईं यसको समयबद्धता र सटीकताको लागि स्वचालित रूपमा तपाईंको वेबसाइट जाँच गर्नुहुन्छ। उत्तम सामग्रीको प्रयोग गरेर तपाईंको सामग्रीलाई सच्याएर र कायम राखेर, तपाईंको सामग्रीले समग्र प्रासंगिकता र थपिएको मूल्य प्राप्त गर्दछ।
तपाईलाई बुझ्न यो सजिलो छ कि यी बुँदाहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् किनकि मूल्या rating्कन वेबसाइटहरूमा गुगलको दृष्टिकोण प्रयोग गरेर। यसमा थप जानकारीको लागि हामी तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछौं हाम्रो ब्लगको भ्रमण गर्नुहोस्।
अब हामीसँग SEO विश्लेषण र अडिटिंगको महत्त्वको बारेमा विचार छ, र किन SEO निजी ड्यासबोर्ड जस्ता उपकरणहरू यति उपयोगी छन्; हामी SEO कारण र लेखापरीक्षण किन गर्नुपर्छ भनेर reasons कारण पत्ता लगाऔं।
१. नियमित नियन्त्रण (सामग्रीहरूको सूची)
ठूलो वेबसाईट परियोजनाको निरीक्षण गर्ने कोहीले पनि वर्षमा कम्तिमा एक पटक अडिट गर्नुपर्छ। लेखा र कानूनी पक्षहरू प्रत्यक्ष रूपमा सामेल गर्न यो प्रायः राम्रो विचार हो। आदर्श समय यसैले वार्षिक गणना अघि राम्रो हुनेछ।
यद्यपि मुख्य उद्देश्य भनेको सामग्री रणनीतिमा पहिल्यै सेट गरिएको उद्देश्य हासिल गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच्नु हो। मार्केटिंग र/वा सम्पादकीय योजनाको पालनामा निर्भर गर्दै, यी कागजातहरूले यसको लागि आधारको रूपमा काम गर्न सक्दछ।
२. सामग्री मार्केटिंग रणनीति समायोजन गर्दै
यदि सामग्री मार्केटिंग रणनीतिमा कुनै परिवर्तनहरू छन्, उदाहरणका लागि परिवर्तन लक्षित समूहहरू, मार्केटि। रणनीति वा यहाँ सम्म कि व्यापार रणनीतिहरूको प्रतिक्रियामा, तब अब सबै सामग्रीहरू सधैं मिल्छ कि भनेर जाँच गर्न राम्रो समय हो।
Website. वेबसाइट पुन: सुरुवात
जब एक योजना पुनर्संरचना वा यूआरएल परिवर्तनको साथ एक वेबसाइट पुन: शुरू, सबै सामग्री अझै पछाडि केहि गलत हुन गयो भने। यदि पुराना यूआरएलहरू पुनर्निर्देशित गर्न आवश्यक छ भने, अब सफा गर्ने र अper्ग प्रदर्शन नगरिएका पृष्ठहरू अलग गर्नको लागि उत्तम समय हो र यस कदममा तपाईंसँग प्रासंगिक सामग्री मात्र लिन्छ।
उत्तम र पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न, तपाईंले एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्ड वा Semalt बाट धेरै अन्य उत्तम उपकरणहरू जस्तै शक्तिशाली उपकरणहरू प्रयोग गर्न निश्चित गर्नु पर्छ।
The. टोलीमा परिवर्तनहरू
यदि सामग्री मार्केटिंगमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सहकर्मीले टोली छोड्छ र त्यो स्थिति पछि भर्दछ, सामग्री अडिट सुरू गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो। जे भए पनि यो कार्यभार कत्तिको सफल भयो, रणनीतिमा आधारित मूल्या including्कन सहित सबै सामग्रीको एक अप-टु-डेट र विस्तृत सिंहावलोकनको विकल्प छैन, त्यसैले तपाईं पुरानो गल्तीहरू दोहोर्याउँनुहुन्न र सफलताहरू जारी राख्नुहुनेछ।
Domain. डोमेन मालिकको परिवर्तन
यदि डोमेन अघिल्लो सामग्री वा पूरै कम्पनीको साथ बेचिन्छ भने, सामग्री समीक्षा सिफारिस गरिन्छ। सामान्यतया, सामग्री रेटिंगले जे भए पनि खरीद मूल्य निर्धारण गर्नमा भूमिका खेल्दछ, यदि यो कुल मात्र यातायात, ब्याकलिks्क, वा खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको रूपमा देखा पर्दछ भने।
यदि खरीद पहिले नै अन्य कारणहरूको लागि गरिएको छ भने, भविष्य अपरेटरको लागि सामग्री विश्लेषण निश्चित रूपमा त्यसपछि सिफारिस गरिएको छ। फेरि, तपाईंसँग उत्तम उपकरणहरू हुनु आवश्यक छ जस्तै SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड उपलब्ध छ।
अब, SEO को व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड उपकरणको बजारमा यसको साथीहरूसँग तुलना गर्न अगाडि बढौं।
SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड, Ubersuggest, Ahrefs, र Semrush: कुन चाँहि राम्रो तपाईंको आवश्यकता मिल्छ?
एसईओ उपकरणहरू बीचको एक संक्षिप्त तुलना अर्थात् व्यक्तिगत पर्सनल ड्यासबोर्ड, उबेरसगेस्ट, अहरेफ्स, र सेम्रुशले निम्न निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ:
सम्भावित परियोजनाहरूको संख्या
को SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड तपाईंलाई असीमित संख्यामा प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि अन्य तीनको उत्तम उपकरण उब्बरसगेस्ट, अह्रेफ्स, र सेम्रुश, सीमित संख्यामा अधिक सीधा संख्याको अरहरिफ हो। यस विन्दुमा, एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्ड टाढा उपकरण हो जुन उत्तम विकल्प प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक उपकरणको स्तरमा अपडेटहरूको उपलब्धताको फ्रिक्वेन्सी
SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड अप-टू-डेट जानकारी र वास्तविक समयमा तपाईंको साइट को विश्लेषण प्रदान गर्दछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि प्रत्येक सेकेन्डमा पास हुन्छ, तपाईंसँग आफ्नो साइटको बारेमा नयाँ जानकारीमा पहुँच छ। अन्य उपकरणहरूमा त्यस्तो दक्षता छैन किनकि उनीहरूले दिने उत्तम विकल्प दैनिक अपडेट हो। केहि एक हप्ता को लागी तपाइँको साइट को लागी नयाँ जानकारी प्रदान गर्दैन।
स्क्यान गरिएको पृष्ठहरू
स्क्यान गरिएको पृष्ठहरूको बारेमा, SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्डले असीमित स्क्यानि system प्रणाली प्रदान गर्दछ। जबकि बजार मा अन्य उपकरणहरू (Ubersuggest) को तुलनामा अधिकतम 1000 मा सीमित छन्; १००० प्रति महीना (Arhefs) र २०,००० प्रति परियोजना (Semrush)।
फेरि, SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्डले यसको दक्षता र शुद्धता पुष्टि गर्दछ।
साथै, शीर्ष पृष्ठहरू, प्राविधिक एसईओ-अडिट, पृष्ठ गति विश्लेषणको साथ सम्बन्धित जानकारीको बारेमा; सबै उपकरणहरूले तपाइँलाई पूर्ण पहुँच प्रदान गर्दछ।
विकल्प एसईओ पर्सनलसँग छ कि अन्य उपकरणहरूसँग छैन
यद्यपि एसईओ व्यक्तिगत ड्यासबोर्डमा सबै सेवाहरू छन् जुन उपकरणहरू उबेरसबगेस्ट, एरेफ्स र सेमरस प्रस्तावको रूपमा छन्; यसका धेरै सुविधाहरू छन् जुन अन्य उपकरणहरूले गर्दैन। एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्डमा केहि धेरै उपयोगी सुविधाहरूमा अन्य उपकरणहरू समावेश छैनन्:
चोरी चोरी: वास्तवमा एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्डले तपाईंलाई तपाईंको साइटमा चोरी चोरीको अस्तित्व जाँच गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्दछ। यो वास्तवमै एकदम महत्त्वपूर्ण कारक हो जुन बिभिन्न खोज इञ्जिनहरूले ख्याल गर्दछन्।
रिपोर्ट योजनाकार: रिपोर्ट शेड्युलरले तपाईंलाई ग्राहक साइट जानकारी अपडेट गर्ने कार्य कुशलता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ तपाईंको कार्यहरू सुगम बनाउन र तपाईंलाई सँधै अप टु डेट राख्दछ। जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यस्ता प्रायः कष्टकर कार्यहरू कति पटक कठिन हुन्छन्, हामी यो पनि बुझ्दछौं किन SEO पर्सनल ड्यासबोर्ड एकदमै मूल्यवान उपकरण हो।
माथि उल्लेखित यी सबै पक्षहरू बाहेक, SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड विश्वभर १ 15 फरक-फरक भाषाहरूमा उपलब्ध छ। यो एक सुन खानी हो र यसको महत्त्व तपाईंको एसईओ सेवाहरू सुधार गर्न मद्दतको लागि राम्रोसँग स्थापित छ।
साथै, यदि तपाईं यस उपकरणको बारेमा बढि जानकारी चाहनुहुन्छ भने, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
बोनस: Semalt पुनर्विक्रेता बन्नुहोस्
Semalt का सेवाहरूको पुनर्विक्रेता कसरी बन्ने? यस प्रश्नको उत्तर हाम्रो साइटमा उपलब्ध छ र हामी तपाईंलाई यसलाई पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं। Semalt पुनर्विक्रेताका रूपमा तपाई धेरै सुविधाहरूबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै नि: शुल्क उपकरणहरूको पहुँच, तपाईंको ग्राहक आधारमा वृद्धि र अन्य धेरै वित्तीय सुविधाहरू।
Semalt साझेदार कार्यक्रममा भाग लिएर आज Semalt पुनर्विक्रेता बन्नुहोस्।
यस लेखको माध्यमबाट हामीले भर्खरै SEO पर्सनल Semalt उपकरण पत्ता लगाएका छौं: तपाईंको सबै आवश्यकताहरूको लागि एक उत्तम उपकरण। वास्तवमा यो उत्तम उपकरण हो जसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहक आधार बढाउन मद्दत गर्दछ र त्यसकारण धेरै पैसा कमाउँछ।
र तपाईंले याद गर्नुहुनेछ, यो एक पूर्ण उपकरण हो, जसले तपाईंको ग्राहकहरूको लागि आवश्यक सबै सुविधाहरू एकसाथ ल्याउँदछ। यसबाहेक, यो अनुपम सुविधाको लागि धन्यवाद, यसले तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्ड वफादारी सुधार गर्न र मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
यसबाहेक, हामीले माथि गरेको तुलनाले एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्ड दक्षता र लागत को मामला मा अझ राम्रो उपकरण हो भनेर प्रमाणित गर्दछ। यस्तो उपकरणको साथ तपाईका सपनाहरू केहि समयहरूमा साँचो हुन्छन्। साथै, हामीसँग विज्ञहरूको एक समूह छ तपाईको लक्ष्य हासिल गर्न प्रभावी ढंगले सहयोग गर्न तैयार छ।
अधिक जानकारी को लागी तपाईले हामीलाई तुरून्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं हामीलाई टिप्पणीहरू पनि छोड्न सक्नुहुन्छ जुन हामी पढ्न र प्रतिक्रिया दिन खुसी हुनेछौं।
प्लस, धेरै अन्य SEO सुझावहरू र रणनीतिहरू पत्ता लगाउनुहोस् हाम्रो ब्लगमा नि: शुल्क।